ဇွဲကပင်တောင်က ထူးဆန်းစွာ သေဆုံးခဲ့သူ ကျောင်းသား ( ၂ ) ဦး နဲ့ ဇွဲကပင် ကရင်မောင်နှမ သမိုင်းပုံပြင် ဆက်စပ်မှုရှိနေမလား…? – Na Pann San
ဇွဲကပင်တောင်က ထူးဆန်းစွာ သေဆုံးခဲ့သူ ကျောင်းသား ( ၂ ) ဦး နဲ့ ဇွဲကပင် ကရင်မောင်နှမ သမိုင်းပုံပြင် ဆက်စပ်မှုရှိနေမလား…?
” ဇွဲကပင် က ကရင်မောင်နှမ သမိုင်းပုံပြင် ” နဲ့ ဇွဲကပင်က သေဆုံးသူ နှစ်ဦး
သေ ချာကြည့် တော်တော်တူတာ ပြီးတော့သေဆုံး ပုံက အတူတူ ထူးဆန်းနေသလား လို့ ဆက်စပ်ကြည့်ရင် ငါတွေးစရာ ပီးတော့ သူတိုနှစ်ယော က်က ရုပ်ချင်းတော်တော် တူနေ သလိုပဲနော် နှုတ်ခမ်းမျက်လုံးနှာခေါင်း သေချာကြည့် တ်ေတော် တူတာပီးတော့သေ ဆုံးပုံ က အတူတူ ထူးဆန်းနေသလား လို့ အဲ့သမိုင်းကြောင်း လေးကော သိရင်ပြောပြကြ ပါလား… ??
ဇွဲကပင်မြေ မှ ဓါတ်နန်းရှင် မောင်နှမ နှစ်ဦး၏ သမိုင်းပုံပြင် တ စ်ခါ က ကရင်ရွာလေးတစ်ရွာ မှ ကရင်အမျိုးသားကြီး စဝ်ဖါ့သန့်(သိုင့်)နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ နန်ဖေါ့ယာ့် တို့တွင် စံစေ့ဖိုးနှင့် နန်မူးဖါန်ဟုခေါ်သော သားသမီး(၂)ဦး ရှိလေသည် ။ အနှစ်နှစ် အလလက ခြိုးခြံချွေတာပြီး ရိုးရိုးသားသား ကြိုးစားစုဆောင်း ခဲ့သမျှ သားကလေး ရှင်သာမဏေ လောင်းဖြစ်ဖို့ အလှူကြီးလုပ်ရန် တောင်ယာထဲတွင် အလုပ်ကြိုးစားနေရင်း ဖခင်ဖြစ်သူ စဝ်ဖါ့သန့်(သိုင့်)မှာ ကျားကိုက်ရင်း တောင်ယာထဲ တွင် ဆုံးရှာလေသည် ။
ဇွဲကပင်က ကရင်မောင်နှမ သမိုင်းပုံပြင် နဲ့ ဇွဲကပင်က သေဆုံးသူ နှစ်ဦး
ဖခင်ကြီး ဆုံးပါးသွားသည့်နောက်ပိုင်း တွင် မုဆိုးမ နန်းဖေါ့ယာ့တို့ သားအမိ ကို ဘဝဆိုး မှ လွတ်မြောက် စေလိုပါသည်၊ မိမိဘဝကို သနားကရုဏာ သက်လှ ပါ သည်။ ကလေးတွေ ကိုလည်း ရင်သွေး အရင်အချာ များနှယ် စာနာညှာတာစွာဖြင့် ချစ်ခင်ပါသည် ဆိုသော တစ်ရွာတည်း မုဆိုးဖိုဖြစ်သူ စောဖါ့ပျုဂ်နှင့် နောက်အိမ်ထောင် ပြုလိုက်သည် ။ ထိုအခါ အပြစ်မဲ့သော စံစေ့ဖိုးနှင့် နန်းမူးဖါန် တို့ လူမမယ် မောင်နှမနှစ်ယောက်၏ ဖြူစင်သော နှလုံးသား လေးတွေ မှာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ပူပင်သောက ဝေဒနာအရောင်တို့ လွှမ်းမိုးလာ ခဲ့သည်။
ငြိမ်သက် ခဲ့သော အိမ်ကလေး မှာ နေ့တိုင်းလိုလို ဆဲဆိုသံ၊ ငေါက်ငန်း မာန်မဲသံဖြင့် ဆူညံလာတော့သည် ။ ပထွေး ၏ ဒေါသနှင့် ယုတ်မာသော၊ ရင့်သီးသော ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းသံများ အောက်မှာ မောင်နှမ နှစ်ယောက် မျက်ရည်ပေါက်ပေါက် ကျခဲ့ရရှာသည် ။နောက်ဆုံး တွင် နန်းဖေါ့ယာ့ခမျာ ဥမမယ် အရွယ်မရောက် သားသမီးနှစ်ယောက်ကို တောအုံချောက်ကြား နွားကျောင်းတဖုံ စပါးထောင်းတစ်လှည့် မခိုင်းရက် ခိုင်းရက်ဖြင့် ခိုင်းခဲ့ရှာရ လေတော့ သည်။
တစ်နေ့ တွင် ပထွေးဖြစ်သူမှ မောင်နှမနှစ် ဦးအား ယာခင်းသို့ခေါ်ကာ ယာခင်းသွားရာလမ်းတွင် မြင့်မားမတ်စောက် သော တောင်ကမ်းပါးကြီးပေါ်မှတွန်းချကာ တစ်ဦးတည်း အိမ်ပြန်လာခဲ့လေသည်။မောင်နှမနှစ်ဦးမှာ တောင်ပေါ်မှ အကျတွင် ဇွဲကပင်ဘုရား ကို အာရုံပြုကာ ကယ်တင် ဖို့ ဆုတောင်းမိလိုက်ကြသည်။ ကမ်းပါးအောက် ဝါးရုံပေါ်တင်နေလို့ အသက် ချမ်းသာရာ ရခဲ့ကြပါသည် ။ညဉ့်နက်သည်အထိ ဘုရားကို ကြည်ညိုရင်း အရုဏ်ကျင်းလုကာ မှ မိခင်ထံပြန်လာကာ အကျိုး အကြောင်း ပြောပြလေသည် ။
ကလေးနှစ်ယောက်ကို ကျစ်နေအောင် ဖက်ထားရင်း နန်းဖေါ့ယာ့ မချိတင်ကဲ ခံစားရတော့သည် ။ သို့သော် ကလေးနှစ်ယောက်ကို အိမ်မှာ ပြန်လည် ၍ ခေါ်ထားဖို့တော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ အခါ ရင်သွေးနှစ်ယောက် အသက်မသေ လုံခြုံအောင် မိမိနှင့်လည်း အလှမ်းမဝေးရအောင် ဇွဲကပင်တောင် ပေါ်က တောအုပ်အငူ လိုဏ်ဂူထဲ တွင် ထားခဲ့လေ သည်။
မောင်နှမနှစ်ယောက် အမေထားခဲ့သော တောအုပ်အငူ လိုဏ်ဂူထဲ ကလည်း ဝေးဝေးလံလံကို မသွားဝံ့။ ကြည့်လေ ရာရာ တောအုပ်ကြီး က ပိန်းပိတ်ညိုမှောင်နေသည်။ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသည့်နေရာ ၊ လူသူကင်းဝေး ၍ သားရဲတိရစ္ဆာန်တို့ အသံများကိုသာ ကြားရသည့် နေရာမှာ မိခင်က လာပို့ထားခဲ့သည်။ပထွေးရန်ကို ကြောက်လွန်းလို့သာ နေခဲ့ရပေမယ့် အမေ့ကို မခွဲချင်ကြ၊ လွမ်းပေမယ့်လည်း လမ်းကမသိ ၊ တောတိရစ္ဆာန်တို့ ရန်ကရှိသေးသည် ။ အနီးအပါးက ရသမျှ တောသီးနှံလေးများကို ခူးဆွတ် စားသောက်ရင်း ဥတုရာသီနှင့် တောဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနေကြရရှာ သည် ။
နှမငယ်ကလေးက ဘာမျှမသိရှာသေးတော့ အစ်ကိုဖြစ်သူမှာ ဂရုစိုက် ရသည် ။ မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံရဲ၊ အဖေကိုတမ်းတ၊ အမေ့ကို လွမ်းရသော ဝေဒနာတို့ကို ကြိတ်မှတ်ခံစားရင်း ဒုက္ခမုန်တိုင်းဒဏ်ကို အလူးအလဲ အံတုနေကြရှာသည် ။ ရံဖန်ရံခါ တွင် ဇွဲကပင် တောင်သို့ ဘုရားဖူး လာကြသူများ ရောက်လာကြပါ၏။ ၎င်းတို့ပေးသွားသော စားရေရိက္ခာ မစို့မပို့လေးနှင့် မျှတစားရည့် အခါလည်း ရှိသည် ။
ငယ်ရွယ်သူ နှမလေးကို ငဲ့ညှာရလွန်းတော့ အစ်ကို လုပ်သူမှာ ဝလင်သည်ဟုပင် မရှိခဲ့ပေ ။ တစ်နေ့သော နံနက်တွင် ချမ်းအေးလှသော ရာသီဥတုကို မီးပုံဖိုပြီး မောင်နှမနှစ်ယောက် အံတုရင်ဆိုင်နေကြစဉ် ခံ့ညားသော ရသေ့အိုကြီးတစ်ပါး သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ထံ ရောက်လာသည် ။ရသေ့ကြီး မှ ငယ်ရွယ်လှသော သနားဖွယ် မောင်နှမနှစ်ဦးအား ရွှေရောင်ဝင်းေ နသည့် ဆေးလုံး သုံးလုံးပေးကာ မီးဖိုအတွင်းသို့ ဆင်းခိုင်းသည် ။
ခုန်ဆင်း လိုက်သောအခါ ငယ်ရွယ်နုပျိုသော လုလင်ပျိုနှင့် လုံမပျိုလေး နှစ်ဦးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားလေသည်။မောင်နှမနှစ်ဦး မှ ရသေ့ကြီးပေးခဲ့သော သုံးမကုန်နိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေ၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်တန်ခိုးတွေ ရကြပြီး ရသေ့ကြီးအား ပေးခဲ့သော ကတိစကား အတိုင်း“ သာသနာတော် အတွက် လုံ့လဝီရိယ စိုက်ကြပေတော့ ၊ သာသနာတော် ကို ကြည်ညို သူတွေ ၊ ဟောဒီ ဇွဲကပင်တောင် ကို ဘုရားဖူး လာကြသူတွေ မှန်သမျှ စီးပွားရေး လာဘ်လာဘ တိုးအောင်၊ ကျန်းမာရွှင်လန်းအောင် မင်း တို့မောင်နှမ စောင့်ရှောက် ရစ်ကြပေတော့” ဟူသော အမှာစကား အတိုင်း သစ္စာပြုကာ ဇွဲကပင်တောင်တော်နှင့် ဆံတော်ရှင်မြတ်အား စောင့်ရှောက် နေခဲ့ ပါသည် ။
ဇွဲကပင်တောင်ခြေမှ လွမ်းဆွတ်ကြေကွဲဖွယ်ရာ ၊ ဂရုဏာသက်ဖွယ် ဓါတ်နန်းရှင် မောင်နှမ ဓာတ်နန်းရှင် စခန်းမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၅၀) ခန့် က နောင်းအိမ်ဆိုင် ဆရာတော် ဦးကေတု ဦးဆောင် တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည် ။ ဇွဲကပင် ဆရာတော် ဦးကဝိဓဇက ဘုရားဖူးများ အပန်းအဖြစခန်းလည်းဖြစ် ၊ သတိရ အောက်မေ့ရာလည်းဖြစ်အောင် ထပ်မံမွမ်းမံ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သိရှိရ ပါ သည် ။
ချမ်းသာချင်ရင် ဖင်မြဲပါ ဆိုတဲ့ …“အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်” ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ဆန်းဝင်း
ညလုံးပေါက် ကေတီဗီ သွားပြီးမိုးလင်း မှ ပြန်လာရင်တောင် မိန်းမကထိုင်ရှိခိုးရမယ့်နည်းလမ်း
” မဟာ တံတိုင်းကြီး ၏ အ နာ ဂတ် “